Macaroni: ukwakheka, izinhlobo, inani lokudla okunomsoco
Ukudla nokuphuza, Izitsha kusuka pasta
Omunye wemikhiqizo ethandekayo futhi efunwa kakhulu kuyo yonke iplanethi yethu ngokufanele ibhekwa njenge-pasta. Ukwakhiwa kwesithako kufaka cishe zonke amavithamini ayigugu namagciwane okudingekayo ukuba umuntu aphile ngokugcwele. Okuqukethwe kwekhalori komkhiqizo okwethulwa kuyoba usizo ukwazi labo abahambisana nokudla okunengqondo nokulinganisela.
Isimo sengqondo sabantu kulo mkhiqizo
Yini esikwaziyo ngomkhiqizo onjenge-pasta? Ukwakhiwa komkhiqizi wayo njalo kubhekisela emaphaketheni, kodwa bangaki kithi abafundela ulwazi oluwusizo? Cishe wonke umthengi uyazi ukuthi isithako esinikeziwe sakhiwa ngokolweni, nalabo abalandela lesi sibalo bazi mayelana nokusetshenziswa okukhethwa kwemikhiqizo yokudla kusuka ezinhlobonhlobo zotshani obunzima. I-Macaroni ihlonishwa ngenxa yezinhlobonhlobo zayo zangaphandle ezingavamile, esizikhokhela amaNtaliyane. Kwamanye amazwe i-pasta ne-ketchup iyisidla sasekuseni yendabuko, izakhamuzi zakwamanye amazwe azicabangi isidlo sasemini ngaphandle kwengxenye ye-pasta enomsoco noma ushizi. I-Macaroni yezinhlobo eziqinile (ukwakheka komkhiqizo esizofunda ngemuva kwesikhashana) kukhethwa abathandi bokuphila okunempilo, ukwesezela isidlo esijwayelekile ngemifino, isipinashi kanye namahlumela kakolweni.
Zingaki izinhlobo zokhula ezikhona? Okokuqala, ukupheka ubuchwepheshe buhlukanisa i-macaroni kusuka ku-pasta eluhlaza nolomile. Sijwayele ukuyisebenzisa somile ngenxa yesikhathi eside sokuphila. Ngokwesayizi, umkhiqizo uhlukaniswe yizinhlobo ezilandelayo:
Ubude (ama-noodles, i-spaghetti, i-bucatini nezinye izijabulisa zase-Italy);
Ubukhulu obuphakathi nesikhashana (iminyango, izimpaphe, ama-seashell nabanye);
I-Small, ikakhulukazi ifanelekile njengesithako esobho (amahlumela, ama-spiderwebs).
I-macaroni emikhulu (ukwakheka komkhiqizo kuzokwethula kule ngqungquthela) kuhloswe ukulungiselela i-lasagna. Kukhona nezinhlobonhlobo zokugxila (ravioli) kanye ne-pasta enemibala ngokufaka izinongo ezomisiwe, amakhambi nemifino. Namuhla, kubaluleke kakhulu ukuba udle i-pasta kusuka kufulawa ophelele, bese ufaka ufulawa we-buckwheat ukolweni. Isidlo sendabuko saseChina - i-glass noodles - isabhekwa njengento exotic etafuleni lethu.
Macaroni: ukwakheka komkhiqizo. Amavithamini namaminerali
Ngaphambi kokucubungula uhlu oluningiliziwe lwezici zamakhemikhali eziqukethwe umkhiqizo owethulwe, ake sikhulume ngemithi efana ne-vitamin efana ne-choline, elandisa ngo-52.5 mg ngehora elilodwa lama-macaroni owomile. Lesi sici sinomphumela omuhle ohlelweni lwesisindo somuntu, i-anti-depressant, ijwayele ukugaya amafutha emzimbeni, ikwazi ukuvikela izingqamuzana zamangqamuzana ezicubu ekubhujisweni, futhi iphinde ikwehlise i-cholesterol egazini.
Ngokuqhubekayo sifunda uhlu olugcwele lwamavithamini ngesisekelo semikhiqizo ethandwa kakhulu eRussia (Makfa macaroni). Ukwakhiwa komkhiqizo kuhlanganisa:
Amavithamini weqembu B (folic acid, riboflavin, thiamine, pyridoxine, kanye ne-pantothenic acid);
Amavithamini weqembu E;
Amavithamini P (kufaka phakathi i-niacin elinganayo);
Uhlu lwezinto ezimbiwa ngamaminerali eziqukethwe kumkhiqizo limelelwa izakhi zamakhemikhali eziwusizo njenge:
Potassium (123 mg);
I-calcium (19 mg);
I-Magnesium (16 mg);
I-Iron (1.6 mg);
I-Copper (700 μg);
Sulfure (71 mg) nezinye.
Inani lokudla lemikhiqizo
Njengoba singabona kusukela kwaziswa okungenhla, kukhona ukwakheka kwamakhemikhali okulinganisela emikhiqizo eyomile. I-Macaroni ngenkathi ukupheka ilahlekelwa ingxenye encane nje yezinto ezilandelwayo ezilandelwayo.
Futhi emkhiqizo kufaka isitashi, i-monosaccharides, i-fibre yokudla, amanzi, ingxenye encane yomlotha kanye namafutha amaningi agcwele.
Inombolo yeBrith 1 eRussia
Kungani iminyaka eminingi ezimweni zokuncintisana okunobungozi Macaroni macaroni (ukwakheka kanye nokudla okunomsoco komkhiqizo esasikucabangayo) kuhlale kuyithandwa kakhulu futhi kuyathandwa emakethe yezokudla, futhi kwazuza udumo ngaphandle kwezwe? Ngokwesiko, kuphela izinhlobo zekhethelo ezikhethiwe kanye nezinhlobo ezikhethiwe ezisetshenziselwa ukukhiqizwa kwezimpahla, nokulawulwa kwekhwalithi kuhlolwa kuzo zonke izigaba. Ngenxa yesikhathi, abanye abakhiqizi basindisa kakhulu izinga lezinto ezibonakalayo, okwenza ukuba umthengi aqaphele ngentengo ephansi yezimpahla. Nokho, "i-Macfa" izama njalo ukujabulisa amakhasimende ngemikhiqizo engcono kakhulu yekhwalithi elihle kakhulu.
Okuqukethwe kwe-caloric yemikhiqizo
Ukucabangela ukubaluleka kwamandla kwemikhiqizo kuthathwa isilinganiso samaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate ngamagremu angu-100 esisindo. Ngakho-ke, i-macaroni (ukubunjwa nokudla okunomsoco esikufunde ngaphambilini) kune-70.5 g we-carbohydrate, 11 g wezinhlelo zamaprotheni kanye no-1.3 g wamafutha. Uma ucabangela okuqukethwe kwekhalori yomkhiqizo, okungama-338 kcal ngamagremu angu-100, kunganciphisa kancane ngesikhathi sokupheka. Yingakho akufanele ukwesaba izitsha ezivela kudasta kulabo ababuka isibalo. Ama-saily amafutha, inyama nenhlanzi-yilokho okwenza i-pasta ephakeme-ikhalori.
Izinzuzo zomkhiqizo nokungalungi
Ama-protein, i-lipids nama-carbohydrate agcwalisa umzimba womuntu ngamandla angenakuphulukiswa, uhlu oluphelele cishe lwamavithamini nama-microelements lunikeza umuntu ithuba lokusebenza ngendlela evamile. Labo abaphutha ngokucabangela i-pasta (ukwakheka komkhiqizo, ulwazi lwabathengi abafakwe kulesi sihloko), isitha sokudla singancoma ukuba sinake iresiphi, esizoyihlinzeka ekupheleni kwalesi sihloko. Kuzo zonke, kuvela ukuthi akuyona imikhiqizo evela koroyi, kepha amafutha namanoni angamafutha, angashintshwa kalula nge-supplements yemifino, ayingozi empilweni.
Iresiphi yesidlo: i-pasta ene-arugula nesipinashi
Ngakho, njengoba sithembisile, sinikeza iresiphi engavamile kubo bonke abathandi bokudla okumnandi nokuphilile. Izithako ezengeziwe zesitsha ziqukethe amaprotheni yemifino futhi zizoqhubeka zicebisa ithebula lokudlela ngamavithamini. Ngaphambi kokuba siqale ukulungisa isidlo, sizobuza ukuthi abakhiqizi bangaphandle bayathandwa ezweni lethu nokuthi ngabe imikhiqizo yabo ihluke yini ezifuywayo ezifanayo? Ngokujwayelekile, igama elithi "Barilla" libhekwa njenge-pasta No. 1 e-Italy . I-Macaroni, ukubunjwa komkhiqizo kuhlangabezana nazo zonke izidingo ze-GOST, futhi futhi kunezigaba ezibanzi kakhulu. Yingakho lo mkhiqizo usuqhamuka kakhulu eRussia. Labo abathengi abasazisa ikhwalithi yaseYurophu, bangasebenzisa imikhiqizo yalo mkhiqizo ekuphekeni. Nasi uhlu lwezithako esizodinga:
Namathisela i-curly - 100 g;
I-hard hard - 70 g;
Isipinashi - 100 g;
I-Arugula - 100 g;
Ukolweni ohlwanyelwe - obuncane obukhulu;
Uma umfundi wethu engumshicileli wokukhiqiza ekhaya futhi asetshenziselwa ukulondoloza ipeni, ke sincoma ukunaka uShabekinsky pasta. Ukwakhiwa kwemikhiqizo, ikhwalithi yemikhiqizo iphinde ihlangabezane namazinga asekelwe.
Epanini, gilisa amanzi, engeza usawoti kuwo, bese unciphisa i-pasta, ulixube bese ulibuyisela emathumba. Pheka i-pasta imizuzu engu-10-15, uvuselele. Uma iphakheji ibonisa izinhlobo ezihlukahlukene zokhula, kungenzeka ukuthi ukwandise isikhathi sokupheka.
Ithiphu : Abapheki base-Italy batusa i-pasta encane kakhulu ngaphambi kokuba bakhonze njengesithako esenziwe ngomumo esitsheni.
Inani le-shizi kanzima ku-recipe lixubene ku-grater enkulu. Igciwane lesigungu kumele lihlanjululwe ngaphansi kwamanzi aphephile, kanye nezinye izithako zomhlabathi.
I-Rucola nge isipinashi izonikeza ngokushesha izinhlayiya zokungcola emhlabathini uma zifakwa esitsheni samanzi okwesikhashana. Manje kusele kuphela ukuhlanza amaqabunga ngaphansi komfudlana wamanzi futhi ungayisebenzisa ngokushesha ngenhloso ehlosiwe.
Isitsha esisheshayo nesempilo
Ukufudumala amafutha epanini lokuthosa, usike i-garlic ehlutshiwe ibe ngamapuleti futhi gazinga kuze kube yilapho kuluhlaza. Iphunga elimnandi, elimnandi kusukela emasekhondeni okuqala lenziwa kulo lonke ikhishi. I-Rukkola nesipinashi igaqe zibe yizicucu bese ufaka ugarliki epanini lokuthosa, fry izithako, njalo futhi zivuselela ngokushesha. Khona-ke amahlumela kakolweni athunyelwa emlilweni. Sixuba ukwakheka - futhi singacima ipuleti.
Amanzi avela emgodleni akhishwa, ngakho-ke ungangezela isithako esanda kuphekwa epanini lokuthosa. Ukupheka lesi sidlo kwakuyisithinta sokugcina: ufafaza i-macaroni nge ushizi ogayiwe futhi ngesikhathi sokugcina sihlanganisa okuqukethwe epanini.
Ngaphandle ukwesaba amapounds engeziwe
Izithako zokudla okunomsoco ziyazi kahle okuqukethwe kwekhalori ephezulu ye-ushizi. Ngakho-ke, kwisidlo sethu esihlwabusayo nesinempilo, singenza ngaphandle kwalesi sici. Ungadla isidlo esilungile ngokushesha, esivame ukukhonza isidlo sakusihlwa.
Iresiphi yalesi sidlo ilinganisela ngokuphelele. I-fiber yemifino, amaprotheni wemifino we isipinashi kanye noshizi onzima, amahlumela kakolweni ahlotshaniswa nama-flavonoids, amavithamini nama-carbohydrate ama-macaroni agcwalisa futhi ahlawulelane. Le dish is organic, esekelwe futhi ngokugcwele futhi efanelekayo gourmets kanye aesthetes, futhi njengoba ezihlukahlukene zokudla. Yebo, abalandeli bokudla okuhlukene, singakuleka ukuba ususe iresiphi ngebhotela lomnqumo noma i-sunflower.
Sithemba ukuthi incwadi yethu yanamuhla iye yaba usizo kumfundi futhi yasiza ukuthola ukuthi yini i-pasta eyenziwe. Ukwakheka kanye nokudla okunomsoco kwemikhiqizo kufakazela ukubaluleka komkhiqizo ematafuleni ethu. Uma wesaba ukuthi uzoba ngcono, udle unamathisela ngezigaba ezincane ngesikhathi sakusihlwa, bese kungabikho lutho oluzokwenzeka kumuntu wakho.
I-pasta egqoke inyama enobisi noma i-giblets yenkukhu
Indlela yokupheka i-spaghetti
Isidlo esihlwabusayo - i-pasta ene-sausage
Isaladi nge-honey agarics
Chelyabinsk, Teachers College: ukubuyekezwa, isithombe, indlela yokufaka isicelo
Ayelapha imisuka zasendle wasukuma isicelo sabo
Poplar elimnandi: incazelo, ukugcinwa, ukubuyabuyelela
Umngcele Kazakhstan sika nge Russia: Ukunqamula obusa amaphepha adingekayo
Imishini yenduku yokudoba yasebusika - egijima futhi eyisithulu